Wadahadalada Ergada Buuhoodle Vs Somaliland | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, Faallo	> Wadahadalada Ergada Buuhoodle Vs Somaliland
Hawd – Wararka ka imanaya hawd iyo Hargeysa ayaa kusoo waramaya in ergo reer Buuhoodle ah oo uu kamid yahay Ex.hogaamiye SSC Saleemaan Xaglo Toosiye ayna weheliyaan odoyaal kasoo jeeda deegaanka Buuhoodle oo maalmahan wadahalo usocdeen Somaliland ay arrimaha qaarkood isla meel dhigeen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in arrimaha meel laysla dhigay ay kamid yihiin sidii nabad galyo ay shacabku ugu wada noolaan lahaayeen gaar ahaan jiidda hore ee Buuhoodle ee uu dhawr jeer ka dhacay dagaalka gaystay qasaare farabadan oo labada dhinac ah.
Qodobada kale ee la sheegay in lagu heshiiyay ayaa waxaa kamid ah lana qodob oo aad loo hadal hayn jiray ku waas oo ah in ciidamada Somaliland dib loo soo qaado.
In lasiidaayo Maxaabiista ay hayaan Somaliland ee kasoo jeeda Buuhoodle ee lagu qabtay dagaaladii hore.
Dhinaca kale Somaliland ayaa dhinaceeda sheegatay in meel laysla dhigay laba qodob oo ah sii daynta maxaabiisya iyo dib usoo qaadista ciidamada.
Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliland Axmed Cadami ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada dib looga soo qaadayo Sool Jooggto oo la keenayo ilaa Qorulugud,sidoo kalana lasii daynayo maxaabiis reer Buuhoodle ah oo gaaraysa ilaa 60 sidaana wuxuu ka sheegay warbaahinta oo ay kamid tahay BBC da.
Si kastaba ha ahaatee wasiirku wuxuu sheegay in uu rajo ka qabo in halkaasi ay nabad kadhacdo.
Waan soo dhawaynaynaa nabad kasta oo ka dhcada deegaankaa waxaase xusid mudan in nabaddu ay ku xidhan tahay Somaliland.
Waxaana jirta ciidan dib loo soo qaadaa inuusan nabad keeneen ee ay nabaddu ku xidhan tahay in meel laysla dhigo waxa keenayay iyi ujeedada awalba meesha loo geeyay iyo sidoo kale ciidamada reer Buuhoodle ee iyaguna hor fadhiyay.
Waxaana kala fog labada aragtiyood ama fikradood ee ay kala qabaan dadka ku kala sugan Hargeysa iyo Buuhoodle.
Haddaan soo koobo Buuhoodle maaha meel nin ama qoys ama reer kaliya uu ka taliyo oo uu samayn karo inuu heshiis cid la qaato sababtoo ah Buuhoodle waa jamhuuriyado kala aaminsan siyaasado kala duwan.
Somaliland waxay dhinaceeda doonaysa ama ay qabtaa in Buuhoodle ay maamulkeeda ka tirsan tahay waxayna ku taamaysaa in Buuhoodle ay gacanteeda soo gasho mana muuqato in ciidankaa loo soo qaado dhulkii laga keenay ee Hargeysa iyo Galbeed,waxaase hadda la’inoo sheegay in dib loo soo qaadayo, (taasi macnaheedu waxaa weeye ciidanka dib haloo kala qaado),waxaana taa udaliil ah sida Wasiirku sheegay in ciidanka laga soo qaadayo Sool Joogto ama meel ka tirsan dibna loo keenayo Qorulugud.
Wasiirka waxaannu leenahay markii aannu khabiirkayaga dhulka,deegaanka iyo Khariidadaha latashanay waxba iskuma jiraan labada meelood waa la’isaga gurmadaa ee haddii nabaddu ay dhab tahay waa in ciidamada lagu ceshaa deegaanadoodii si ay caruurahooda ula ciidaan haddii Alle Idmo,” nabadduna yeysan umuuqan qub moos oo laysku dhigayo!!”.
Waxaannu ku baaqaynaa in nabaddu ay ku xidhan tahay in Somaliland ay hunguriga ay ka qabto Buuhoodle ay dib ula noqoto,haddii taasi dhacdo dadka deegaan wadaagta ah wey iska heshiinayaan oo awalba dan wadaag, daris wadaag ah ay ahaayeen.
Reer Buuhoodlana waa inay dadka ay deegaan wadaagga iyo dariskaba yihiin ay si wanaag iyo nabadgalyo ku jirto kula noolaadaan wixii ka dhexeeyana ay wadahadal iyo gogol nabadeed ay ku dhamaystaan, qolada kalana waa inay sidaa ula garataa,haddii kale waxaa dhibtu ka dhacaysaa waalabadiina dhinac ee dariska ah.
Somalia – Madaxweyne Shariif Oo Laba Degmo U Magacaabay Deegaanno Gedo Iyo Bakool Ah – Wareegto Syrian, Jordanian troops clash on border + Related Articles